ခေါက်လျန်းဖျင့်…. ( ချဉ်ငံစပ် ခေါက်ဆွဲ) ရှမ်းအစားအစာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ခေါက်လျန်းဖျင့်…. ( ချဉ်ငံစပ် ခေါက်ဆွဲ) ရှမ်းအစားအစာ
ခေါက်လျန်းဖျင့်…. ( ချဉ်ငံစပ် ခေါက်ဆွဲ) ရှမ်းအစားအစာ
Posted by Yin Nyine Nway on Aug 14, 2011 in Food, Drink & Recipes | 22 comments
ခေါက်လျန်းဖျင့်.... ( ချဉ်ငံစပ် ခေါက်ဆွဲ) ရှမ်းအစားအစာ
ပဲငပိကို အရေဖျော်ထားမယ် …ပျစ်ပျစ်လေး၊ ခရမ်းချဉ်သီး တလုံးကို ဘာမှမပါပဲ ရေနဲ့ ရောကြို အဖတ်ကြေအောင်လုပ်ပြီး…အခွံတွေကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ၊ မုန်လာထုပ်ကို ပါးပါးလေး လှီးထားမယ်….သကြားကို အရည်ဖျော်ထား…နှမ်းကိုထောင်းထား….
အရင်ဆုံး …. ဆန်ပြားခေါက်ဆွဲထဲကို ….ပဲငပိ အရေဖျော်ပြီးထည့်… မုန်လာထုပ် ပါးပါးလှီးပြီးထည့် …..ခ၇မ်းချဉ်သီးကို ရေနဲ့ အရေကြိုပြီး အခွံမပါအောင် စစ်ပြီးထည့် သကြားရည်ထည့်ပြီး အပေါ်က ၊နှမ်းထောင်း နံနံပင်ဖြူးပြီး စားရင် …. အရသာရှိလှတဲ့ ချဉ်ငန်းစပ်ခေါက်ဆွဲလေးကို ရမှာပါ…
လုပ်စားကြည့်ကြနော်…. ရန်ကုန်ရာသီဥတုနဲ့ အရမ်းလိုက်ပြီး နွေရာသီ ပူပူမှာ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေး စားရင် ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ အရမ်းစားကောင်းတယ်….
နောက်ထပ်ကြုံ ရင်လည်း ရှမ်းအစားအစာ ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ တင်ပေးအုန်းမယ်…ဘာစားချင်လဲသာပြောလိုက်
ကောင်းမှကောင်း။ ပုံကိုကြည့်ပြီး ချက်ခြင်းကို စားချင်စိတ်ပေါက်လာပြီ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ချက်စားရမှာတောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ယုဇန ပလာဆာမှ ၀ယ်စားလေ…:)
သားသား ဖို့ 
အခု မန်းနေတဲ့ အချိန်
တော်တော် စားကောင်းမယ့် ပုံပဲ
ရှဲရှဲ ရင်ငြိမ်းနွေ ပါ
ခေါက်လျန်းဖျင့်” ဆိုတာက ဆန်တိုဖူး ဗျ၊ ခေါက်ဆွဲ မဟုတ်ဘူး။ ခေါက်လျန်းဖျင့် ထဲမှာ ထည့်တဲ့ တာ ပဲပုတ် တစ်မျိုး၊ ပဲငပိ တော့ မဟုတ်ဘူး။ ပဲပုတ် ချဉ်ကို ထောင်းထားတာမျိုး။ ယုဇန ပလာဇာ က Food corner မှာ ရှမ်းအစားအစာဆိုင် တွေ ရှိတယ် အဲ့ဒီမှာ ၀ယ် လို့ ရတယ်။
အဲလို ခေါက်ဆွဲ နဲ့ လုပ်စားတာကိုတော့ တောင်ကြီးဖက် မှာ ချဉ်ငံစပ် လို့ ခေါ်တာပဲ။
ဆန်ထိုဖူး က ဒီမှာ သိပ်ဝယ်လို့မရဘူးလေ…သူ့အစား ခေါက်ဆွဲထည့်စားလဲ ဖြစ်ပါတယ်
ပဲငပိနဲ့ လုပ်စားလဲ ဒီအရသာရပါတယ်…..
ရှမ်းခေါက်ဆွဲတော့ ကြိုက်တယ် တစ်ခါမှကိုယ်တိုင်လုပ်မစားရသေးဘူး၊လုပ်စားကြည့်လိုက်အုံးမယ။်ကျေးဇူးပါ။
What is မုန်လာထုပ်? You maens that “califlower”= pan gaw phee? Let me know, please.
ဖြေရင်းနဲ့ ရှုပ်ကုန်ပြီ.. ဂေါ်ဖီထုပ်.. လား..
ကင်ချီ စိမ်တာ တွေ့တွေ့နေတဲ့ မုန့်ညှင်းထုပ် အမျိုးအစားလား
ကိုရီးယားမှာ ကင်ချီ လုပ်နေတဲ့ ဖြူဖြူ အထုပ်ကြီးကို ခေါ်တာ
မုန့်ညှင်းထုပ် That’s right!
Thanks, ma SUE. It is available here so many namely in “Haku Sai”.
Thanksalot also to Yin Nyein Nway for your post. I will make it tomorrow.
လက်ဘက်ထုပ်မှာ ရောသုတ်တာလေ…ဂေါ်ဖီထုပ် ခေါ်တာလား
အဖြူရောင် အထုပ် ကြီးကြီးလေ…
ဟိုဟာက မုန်လာထုပ်ပါ ကင်ချီလုပ်တာက
You meant that carrbage (gaw phee) . Oh I see, it is very esay word. I get it now. Sorry for confusing all of you.
အားလုံးအဆင်ပြေအောင် နည်းလမ်းလေးပြောပြမယ်။ ဟင်းချက်နည်းတင်ရင် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတင်။ အဲဒါဆို မမှားနိုင်တော့ဘူး။ အိုကေ နော်။
အီး…ဟီး…. ဒါချို တင်ရတော့မှာ အဟုတ်ဘူး…. ခေါက်ဆွဲအွန် ဆိုတာလေး တင်တာ တင်မရဖြစ်နေတယ် မမ ရဲ့
ဖွတ်မရ ဓာမဆုံးတော့ ဖြစ်တော့မှာပဲ။ လျှာရှည်မိလို့ နောက်ထပ် ချက်နည်းလေးတောင် မသိရ ဖြစ်တော့မယ်။
ဖွတ်မရ ဓားမ ဆုံး- ဖြစ်တော့မှာပဲ။ လျှာရှည်မိလို့ နောက်ထပ် ချက်နည်းလေးတောင် မသိရ ဖြစ်တော့မယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်က Cabbage လေ။ ရန်ကုန်မှာ တစ်ထုပ် ၅၀၀ လောက်ရှိတယ်၊
ယုဇန က ရွှေတြိဂံ စားသောက်ဆိုင်မှာ ခေါက် ဖိင်း ၀ယ်လို့ ရတယ်ဗျ။ ပဲပုပ်လဲ ၀ယ်လို့ ရတယ်။
Mr. Kai အတွက် ရှမ်းတွေ ( အရှေ့ ပိုင်း) စားတတ်တဲ့ မုန်ညှင်းချဉ် လုပ်နည်း ပြောပြချင်တယ်။
၁။ အစိမ်းချဉ် .. မုန်ညှင်း ရေဆေး ပြီး ရေစစ်အောင် လှန်းထားလိုက်၊ အရွက်နွမ်းသွားတဲ့အထိ။ ပြီးရင် သေးသေးလေး ဖြတ်လိုက်၊
ပြီးတော့ ဆား တော်ရုံထဲ့ပြီး အားရပါးရနယ်၊ ဂျူးမြစ် ထည့် ချက်ပြီးစ ထမင်း တစ်ဇွန်းလောက်ထဲ့နယ်၊ ပြိးတော့ ဖန်၊ ကြွေ၊ မြေ တစ်ခုခု နဲ့ လုပ်တဲ့ အိုး သို့ ပုလင်းထဲ သိပ်ထည့် ပြီးတော့ ရေကျက်အေးနဲ့မုန် ညှင်းကို မြှပ်အောင် လောင်းထည့်လိုက်။ အခန်း အပူချိန်မှာထား သုံးရက်လောက်ဆို စားလို့ရပြီ၊ တစ်ချို့ ကတော့ နှစ်ရက်လဲ စားတာပဲ။ ကြာကြာထားတော့ ပို ပို ချဉ်လာတာပေါ့။ အရေးကြီးဆုံး အဆင့်က ဆားနဲ့ နယ်တဲ့ အဆင့်ပဲ။ ဂျုးမြစ် မရှိရင် ကြက်သွန်ဖြူစမ်းထဲ့ကြည့် ၊ မဟုတ်ရင် အနံ့ကတမျိုးကြီးဖြစ် လို့စားရတာသိပ်မကောင်းဘူး။
၂။ မုန်ညှင်းကို နွမ်းအောင် နေလှန်း၊ ရေဆေး၊ အရွက်ကို ခပ်ကြီးကြီးပဲ ဖြတ်။ ဆားခပ်ပြင်းပြင်း ထဲ့ပြီး အသားကုန် နယ်၊ ပြီးရင် ရေပြန်ဆေးလိုက်၊ ပြီးတော့ ငရုတ်သီးမှုန့် ထဲ့နယ်။ ပြီးရင် အပေါ်က ပြောတဲ့ ပုလင်း လိုမျိုးမှာ သိပ်ထဲ့။ ရေထည့် စရာ မလိုဘူး၊ ထမင်း သို့သကြား၊ ကြံသကာ ထဲ့လိုက်တော့ ချဉ်တာပိုမြန်တယ်၊ ပိုချဉ်တယ်။ မထည့်ရင်တော့ သုံးပတ်လောက်ကြာတယ်။ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပျမ်းမျှ အပူချိန်မှာပြောတာနော်။ အေးတဲ့နိုင်ငံဆိုရင်တော့ ပို ကြာမယ်ထင်တာပဲ။ ရှမ်းမုန်ညှင်းချဉ်က တရုပ် မုန်ညှင်းချဉ်တွေလို မဆာလာ မသုံးတဲ့အတွက် အနံ့တော့ နည်းနည်းကွာတယ်။ နယ်တဲ့ အဆင့်မှာ တရုပ်မဆာလာ ထည့်လိုက်ရင် တရုပ်နံ့ ထွက်လာတာပဲ။ အချဉ်တည်တဲ့ အခါ ဆားနဲ့ပြုပြင်တဲ့ အဆင့် က အရေးကြီးဆုံးပဲ။